« Eco-village » Vohitsara : nofoanana ny « Festival Art-Iary » | NewsMada
« Eco-village » Vohitsara : nofoanana ny « Festival Art-Iary »
Par Taratra sur 20/10/2017
Tokony hotanterahina ny 1 hatramin’ny 5 novambra izao, ao amin’ny « Eco-village » Vohitsara, any Toamasina, ny andiany voalohany amin’ny « Festival Art-Iary ».
…Nofoanana anefa izany, araka ny nambaran’i Claudio Rabemananjara, mpanao soradihy, mpitarika ny kaompania My Crew ary mpikarakara izao hetsika izao. Sarotra ny hampanantena ireo mpandray anjara ny hahatsara ny toe-draharaha mikasika ny pesta eto amintsika, amin’io daty io. Izy ireo anefa, mila valin-teny matotra : ho raikitra sa tsia ilay « festival ». Noho izany, naleon’ny mpikarakara aloha nofoanana mihitsy, araka ny voalazan’i Claudio hatrany. Marihina fa maro ny avy any ampitan-dranomasina, ireo mpanakanto efa nasaina hanafana ny « Art-Iary ».
Raha tsiahivina, sehatra hamohazana ny talenta sy ny kanto ao anatin’ny tsirairay any, ary amin’ny lafiny maro, ny « Festival Art-Iary ». Nanamboatra toerana manokana handray izany ny mpikarakara. Tsy inona io fa ny « éco-village » Vohitsara. Miavaka izy ity, satria vita amin’ny kojakoja efa nampiasaina nefa tsy ilaina intsony ny trano sy ny sehatra ao.
Na tsy tontosa aza ny « festival », mitohy ny fanamboarana ity toerana ity. Antenaina kosa fa ho raikitra amin’izany ny « Art-Iary », amin’ny taona 2019, satria heverin’ny mpikarakara ny hanatontosa izany isaky ny roa taona.